SIFOOYINKA QULQULKA AGLAONEMA EE GURIGA - DHIRTA GUDAHA
Shuruudaha xanaanada ee guriga lagu xanaaneeyo
Aglaonema waxaa loo tixgelinayaa inay yihiin qaraabada ugu dhow ee dieffenbachia waxayna leedahay sharax la mid ah iyada. Waa geedo dufan leh oo leh stem uprightly toosan. Noocyada qaarkood ee agleonema, waaxaha garbaha si siman u shaqeeya.
Shaybaarka dhallinyaradu ma laha astaan ​​cad. In dhirta qaangaarka ah, stem gaab ah ayaa la sameeyey, taas oo weli ku hadhay saldhigyada caleemaha dhacday ayaa si fiican loo ilaaliyaa.
Warshadu waxay leedahay caleemo cufan oo cufan, oo daboolay qaab, oo gaadhaya dherer 25 illaa 30 sentimitir oo lagu meeleeyo petioles dheer. Noocyada kala duwan ee aglaonem waxay leeyihiin midab caleen kala duwan. Aglaonema waa mid gaabis ah, sidaa daraadeed iyadu ma awoodi doonto inay ka farxiso milkiilaha oo leh heerar xoogan oo horumar ah.
Waxaan abuuri karnaa xaalado aan fiicneyn oo loogu talagalay beerashada guuleysiga
Aglaonema waa wakiilka qoyska Aroid. Goobta dabiiciga ah, baadiyaha ayaa doortay qaybaha hoose ee kaymaha kulaylaha ah sida deegaankeeda, waxaa kale oo laga heli karaa bangiyada wabiyada, harooyinka iyo dabaylaha. Sababtoo ah iyada oo aan qabyo ahayn, aglaonema-shaashadu ma keenayso dhibaato kasta oo guriga lagu hayo xitaa bilowga beeralayda beeraha, laakiin dhalaalkeeda, caleemo madow-cagaaran ah oo leh meelo lacag ah ayaa si sahlan u noqon doona qurxinta ugu weyn ee aqal kasta.
Aglaonema waxay doorbidaan daaqadaha daaqadaha waqooyiga ama bariga. Sidoo kale, tijaabooyinka leh caleemo cagaaran waxay dareemi doonaan mid weyn marka la rakibo daaqadaha, meelahaas oo leh iftiin ku filan.
Ma taqaanaa? Tusaalooyinka leh caleemo midab leh, sida iftiinka iftiinka, laakiin waa in laga ilaaliyo qorraxda tooska ah. Haddii ay duurka udhigto aglaamooniga si joogto ah u xanuunsanaya iftiin la'aan, waxay lumin karaan tayada qurxinta.
Warshadu waxay u dulqaadataa penumbra si fiican, iyo iftiin qorraxda oo aad u iftiimin kara oo ka muuqda caleemo uu gubayo.
Cudurka sawir-faafinta oo ay sabab u tahay xaqiiqda ah in bii'ada dabiiciga ah, waxay hoosta ka hooseysaa laanta geedaha kulaylaha, halkaas oo aan qorraxdu ku dhicin. Tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad dharka ku dhejisid agagaarka hoose ee mugdiga ah ee guriga, halkaas oo dhirta kale aysan ku noolaan karin.
Aglaonema ma aha mid xasaasi u ah isbeddelka heerkulka: xagaaga, dhirta si fudud u diiriya heerkulada illaa +30 digrii, iyo xilliga jiilaalka maaha mid cabsi gelinaysa heerkulka +15 digrii. Inkastoo heerkulka ballaaran ee heerkulka, dhirta ayaa dareensan raaxo heerkul ah laga bilaabo +20 ilaa + 25 digrii.
Daryeeli waayeelka leh xirfad
Adiga oo dooranaya meesha saxda ah ee aglaamamka ee guriga iyo bixinta iftiin ku filan, heerkulka, qoyaanka, bacriminta iyo waraabinta, waxaad xaqiijin kartaa in geedka uu helo wax kasta oo uu u baahan yahay nolol raaxo leh.
Aglaonema waa ku filan qoyaan-jecel, sidaas darteed, marka ay sii kordheyso, waxaa lagama maarmaan ah in la hubiyo in xilli diiran qolka dhulka dheriga ah ee dheriga ah marnaba soo baxaan, maadaama ay taasi si xun u saameyn doonto horumarkeeda.
Si ay dhirtu u dareemaan raaxo xagaaga, waxaa lagama maarmaan u ah inay maalin walba ku buufiyaan kaynta oo ay si joogto ah u nadiifiyaan caleemaha ka soo baxa ciidda.
Waa muhiim! Aglaonema waa milkiilaha caleemaha quruxda badan. Laakiin si loo xoojiyo tayada qurxinta, ma aha lagama maarmaan in la nadiifiyo iyaga oo leh xal in lagu daro iftiin, maadaama tani ay si xun u saamayn doonto horumarinta baadiyaha iyo xitaa sabab u noqon kara dhimashada geedka oo dhan..
Si kastaba ha ahaatee, horumarinta caadiga ah ee baadiyaha leh bilawga ah cimilada qaboobaha, waa mid aad u muhiim ah in ciidda u dhexeeya waraabinta ku dhowaad gebi ahaanba ka daadi, kaas oo kaa caawin doona ka hortagga horumarinta fangasaha fangasiga.
Xilliga qabowga, duurka ayaa la waraabiyaa labadii toddobaadba mar. Inta lagu jiro xilliga qaboobaha geedka uma baahna buufinta: waa ku filan haddii aad siisid qubeys diirran bishiiba mar ama tirtir caleemaha qoryaha qoyan. Haddii dhibco madow ay ka muuqdaan caleemaha raali-gelinta, tani waa calaamad cad oo ay ku dhibtooto biyo aan habooneyn.
Aglaamema wuxuu u baahan yahay quudinta sanadka oo dhan. Inta lagu jiro kobcinta firfircoon, duurka ayaa la quudin karaa ugu yaraan laba jeer bishii. Xilliga jiilaalka, Bacriminta waxaa la codsadaa mar bishii. Bacriminta waxaa loo isticmaalaa bacariminta, kuwaas oo ku jira nitrogen, potassium, fosfooraska, iyo sidoo kale zinc, magnesium, manganese, fitamiin B iyo phytohormones.
Aglaonema waa mid aad u sun ahiyo marka, marka daryeesha duurka, isku day inaad sameyso dhammaan nadiifinta gacmo gashiga caaga ah, tan iyo xataa xitaa qadar yar oo cabitaan ah maqaarka ama taabashada caleemaha iyo miraha geedka ee dadka xasaasiga ah waxay keeni karaan caro daran.
Gaar ahaan masuuliyad ahaan, waa lagama maarmaan in la tixgeliyo xulashada booska si loogu rakibo xayawaan, haddii ay jiraan carruur yaryar oo guriga ah.
Aglaonema waxay leedahay difaac aad u fiican, laakiin weli, mararka qaarkood waa inaad ka badbaadisaa cudurada iyo cayayaanka kuwaas oo keeni kara waxyeelo weyn oo geedka.
Inta badan dhirta aglaonema ayaa xanuunsanaya laga soo bilaabo thrips, aphids iyo muruqyo.
Haddii aad ogaato in sababta caleenta ah ee agagaarkaaga uu bilaabay inuu ciribtiro, ka dibna baro dhinaca gadaashooda: hubaal waxaad ku arki doontaa halkaa caarada caarada cas. On baadiyaha cudurka qaba deformed, huruud isu beddela iyo hoos u caleemaha, iyo leh abuur ah ballaaran dhirta laga yaabaa in ay bilaabaan in ay ka danbeeyaan koritaanka iyo xitaa u dhintaan. Si aan u seegin cayayaanka, waxaa lagama maarmaan ah in si nidaamsan loo baadho duurka si loogu helo cayayaanka. Marka la ogaado aphids ku dhaq duurka ee hoos biyo socda iyo caleenta cayayaanka leh biyo adag oo xoog leh. Markaad xayawaanka ku hayso gaashaan tirtiro caleemo leh isbuunyo oo lagu rusheeyey xal khamri ah.
Iyada oo ay duurka ku beeri weyn yihiin waxaa lagu daaweeyaa "Aktellik" ama "Fufanon" oo ah heerka 15 ama 20 dhibcood oo ah daroogada halkii litir oo biyo ah. Marka lagu dhirfiyo dhirta caarada caarada, waxaa lagu buufiyaa "Pegasus" ama "Decis".
Aglaonema waxay u adkaysatey fiyano badan, hase yeeshee si buuxda looma difaaci karo caleemo cas iyo caleen cagaaran. Haddii aad ogtahay calaamadaha cudurkan caleenta, waa inaad isla markiiba daaweysaa dhirta adoo ah wakiil kasta oo fungicidal, tusaale ahaan, Acrobat ama Euparen.
Qaar badan oo beeraley ah ayaa cidhiidhi ah su'aasha, sababta caleemaha u noqdaan huruud ah aglaamamka? Xaqiiqdu waxay tahay in caleemaha warshadani ay muujinayso caafimaadkeeda iyo raaxada. Haddii caleemaha ay noqdaan huruud iyo hurdo, Taas macnaheedu waa in agleonema uu qabo qabow. Haddii ay dhacdo in geesahooda ay heleen midab madow, iyo dhirta lafteeda ayaa bilaabay inay si wayn u korodho koritaanka, tani waa calaamad muujinaysa xaqiiqda ah in la waraabiyo biyo qabow iyo kuwo adag.
Sidoo kale mararka qaarkood oo aan raacin xeerarka asaasiga ah ee sii kordhaya talooyinka caleemaha aglaamamka wuu jabi karaa oo heli karaa bunka.
Tani waxay soo jeedinaysaa in baadiyaha ay ka timaaddo hawo qallalan. Buufiska joogtada ah ee dhirta ayaa sii xoojin doona dhibaatada isla markaana soo celin doona muuqaal caafimaad leh.
Muuqaalka kore ee dhibco cad oo ku yaal xaashida baadiyaha - calaamad muujinaysa in dhirta loo soo bandhigay qorraxda tooska ah.
Dhammaan wax ku saabsan isuduwidda agleonema
Qeyb muhiim ah oo ka mid ah beerashada guuleysiga ee agleonema waa gawaarida ka dib iibsashada. Xaqiiqdu waxay tahay in baadiyaha aan ku kori karin ciidda tayada liita, ma awoodaan inay buuxiyaan baahidooda nafaqeynta.
Waa muhiim! Ka taxadar daryeellada, ku-tallaalidda iyo taranka aglaamamka, maaddaama juuska ka soo baxaya jeexisku waa mid aad u sun ah. Haddii uu taabto maqaarka, xuubabka xuubka afka ama hunguriga, waxay keeni kartaa xanuun, casaan iyo barar. Marka la eego, dhammaan manfacyada leh baadiyaha waa in lagu fuliyaa gacmo gashi.
Aglaonema ma aha mid aan caqli gal ahayn, laakiin xulashada carrada loogu talagalay waa in la qaado si masuuliyad leh, maadaama ay jeceshahay in ay koraan on carradu iftiin iyo dabacsan, oo lagu gartaa aeration wanaagsan iyo qoyaan uumi. Si aglaonema ay u koraan oo u horumaraan sida caadiga ah, waa in la isticmaalo substrate ciidda beerashadooda, oo ka kooban dhoobo, ciid iyo dhul caleen ah oo ah saamiga 1 x 1 x 2.
Si looga hortago guuldarada duurka ee leh infakshan fungal ah, waxaa lagu talinayaa in lagu daro dhuxul yar oo la jajabiyey subagga.
Marka laga soo tago xulashada saxda ah ee substrate, waxaa lagama maarmaan ah in lagu qalabeeyo lakabka dheecaan wanaagsan ee dheriga, taas oo ka hortagi doonta biyaha taagan iyo acidification ee ciidda. Warshadu waxay dareemeysaa weyn marka koranto ahaan loo koro ama aquarium.
Si koritaanka wanaagsan ee caleemaha, waxay u baahan tahay meel xaddidan oo xididdada, sidaas darteed, marka aad dooranayso dheri cusub, fiiro xaqiiqda ah in ay tahay in ay ahaato laba sirimitir oo ka badan mugga marka loo eego mid hore.
Agoonema ayaa si tartiib ah u kora, sidaas darteed duurka u yar ayaa u baahan in la isku shubo sanadkiiba. Marka xayawaanku gaaro da'da saddexda sano, wax ka badan hal mar ama seddex sano labadii sano. Cudurka qaliinka ayaa ugu wanaagsanaa guga bilowgii marxaladda koritaanka firfircoon, taas oo kordhin doonta fursadaha baadiyaha si ay u noolaadaan.
Neefsashada Hababka loo yaqaan Aglaonema
Haddii aad dooneyso in aad ku qurxiso quruxda dibada, markaa waa inaad ogaataa sida uu uhogaarmaan u yahay. Faafinta aglaamamka guriga ayaa lagu sameyn karaa saddex siyood:
Dhamaan qaababka waa sahlan, sidaa darteed waa in geedka cusubi uu awood u yeeshaa sida ubaxlaha qibrada leh, iyo casriga.
Habkee dooran kartaa waxay ku xiran tahay doorbididda dhirta dhirta iyo helitaanka waqti xor ah.
Agmeonema koriinka laga bilaabo abuurka ayaa loogu talagalay dadka qorsheynaya helitaanka qadar ballaaran oo beerto ah muddo gaaban.
Ma taqaanaa? Geedaha Aglaonema koraan badanaa gaabis ah marka loo eego gooynta, sidaa daraadeed habkani ma aha mid ku habboon kuwa doonaya in ay helaan dhirro dhawr ah sida ugu dhakhsaha badan.
Abuurka aglaonema waxaa si fudud loo iibsan karaa, adigana waad soo ururin kartaa haddii guriga uu leeyahay dhir ubax weyn oo ubax ah. Marka ururinta abuurka, hubso in berry ay si fiican u kala soocaan kobaca oo ay leeyihiin midab madow.
Ka dib marka la ururiyo berry, miraha si degdeg ah ayaa looga saaraa iyaga, si fiican u dhaqday oo la qalajiyey. Abuurka cusub ayaa leh biqil aad u fiican, laakiin habka kaydinta tayada waxay si xoog leh hoos ugu dhigi doontaa.
Seeds waxaa lagu beeray weelasha leh substrate la diyaariyey, daboolay dhalooyinka ama filim iyo ku riday meel madow diiran. Sida substrate u daadi, waxaa lagu talinayaa in lagu buufiyo leh dhalada buufin.
Weelasha waxay hawo gaaban hal mar maalintii, taas oo ka caawisa kahortaga miraha inay daboolaan caaryada. Ka dib geedo helay laba ka mid ah caleemo run ah, waxaa lagu wareeri karaa weelal gooni ah.
Aglaonema si fiican u faafin by gooyn. Maaddaama ay fududahay iyo heerka sare ee wax ku oolnimada, habkani waxaa loo tixgeliyaa kuwa ugu jecel beeraleyada badan. Si aad u hesho guntooda dhinaca iyo caleemaha apical, iyo sidoo kale qaybaha jir ah.
Wixii rooting degdeg ah, qaybaha stem waa in ay leeyihiin ugu yaraan laba caleemo ah. Goobta baadiyaha ah meesha gooynta la gooyey waa in lagu daaweeyaa dhuxul la jajabiyey, taas oo qallajin doonta nabarka iyo ka hortagga in cudurku galo.
Jeermiska soo baxay waxaa lagu beeray substrate diyaarisay iyo si fiican u waraabiyey. Si loo kordhiyo suurtogalnimada in la xidho, sprouts waxaa lagu dabooli karaa gasacadaha ama qaybaha dhalooyinka caaga ah. Tuubooyinka leh gooyn la dhigay meel diiran ilaa xididka.
Gooynta waxay u baahan yihiin qulqulaya nidaamsan. Si looga hortago dhirta inay noqdaan kuwo caaryo ah, waxaa maalin walba la duubayaa, taas oo sidoo kale siinaysa hawo cusub.
Qaybta rhizomes waa hab kale oo habboon oo hab fudud ee dhalmada. Marka lagu gudajiro howlgalkan, waxaa lagama maarmaan u ah dhirta dhirta si ay ula tacaalaan duurka si taxadar leh sida ugu macquulsan, tan iyo dhirtaasi waa sun.
In geeddi-socodka aglaonema sii kordhaya, dhirta dhirta ayaa ogaan kara in uu korayo, geedkiisa u koraa aad u xoog badan oo caleemaha dhalinyarada u muuqdaan on. Caleemaha dhalinyarada ee kiiskan waa kala go'ay waxaana loo isticmaalaa wax beerto.
Geedo leh caleemo caafimaad leh iyo nidaam xidid si fiican u horumarsan ayaa ku habboon beerto. Geedo ka hor inta aan la dhicin waxaa lagu daboolaa gasacadaha ama bacaha balaastigga, taas oo kuu ogolaanaysa inaad abuurto microclimate ugu raaxo leh ee qaabka aasaasiga ah. Mustaqbalka, daryeelka ee sprouts ka kooban yahay waraabinta waqtigeeda iyo buufin joogto ah. Aglaonema waa warshad aan qurux badnayn oo soo jiidata beeraleyda ubax oo leh caleemo waaweyn, kuwaas oo si sahlan u qaadi doona meesha ugu muhiimsan ee ururinta wax walba waxayna noqon doontaa qurxinta ugu weyn ee guriga. Laakiin aad u feejignaan marka aad sii kordheyso, sababtoo ah quruxdu way ka fog tahay wax aan waxyeello lahayn: waxaa jira sunta xooggan ee caleemaheeda!